အချစ်စာပေ – မြန်မာသတင်းစုံ
*** အအိုကြိုက်တဲ့ကျနော် *** တခြားယောကျာင်္းတွေတော့မသိ ကျနော်ကတော့ မိန်းမလိုးရမယ်ဆိုရင် အပျိုထက် အိမ်ထောင်သည်မိန်းမ သို့မဟုတ် တစ်ခုလပ်မိန်းမတွေကိုလိုးရတာပိုကြိုက်တယ်ဗျာ။ အပျိုရဲ့အဖုတ်ကကျဉ်းတော့ လိုးတဲ့အခါကျဉ်းကျပ်တဲ့အတွက် အရသာပိုကောင်းတာတော့မှန်တယ် သို့သော်..အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတွေကိုလိုးသလို စိတ်ထင်တိုင်းဆောင့်ဆောင့်လိုးလို့မရဘူးလေ အဲ့လိုစိတ်ထင်တိုင်းဆောင့်ဆောင့်မလိုးရပဲ ညင်ညင်သာသာလေးပဲလိုးပေးရတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအားမရတဲ့အတွက် အပျိုထက်အအိုကိုပိုလိုးချင်တယ်ပြောတာပါ။ အခုကျနော်ရေးတင်မည့်ဇာတ်လမ်းကတော့ စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင် အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ လိုးဖြစ်ပုံဇာတ်လမ်းဆိုကြပါစို့ဗျာ။ သူ့နာမည်ကို’မေ’လို့ခေါ်ရလွယ်ခေါ်ရအောင်ဗျာ ကျနော့်ထက်ကြီးတော့’မမမေ’လို့ဆိုကြပါစို့။ ‘မမမေ’ကကလေး၃ယောက်ရဲ့အမေပါ ဒါပေမယ့် သူ့အိုးကတောင့်သလို နို့တွေကလဲတွဲမနေပဲ အခုထိဆွဲဆောင်မှုကအပြည့်ရှိတယ်လေ ဘော်ဒီကအမိုက်စားမို့ ကျနော်အရမ်းလိုးချင်လို့လိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒီနေရာမှာသယ်ရင်းတို့ကို အကြံပြုလိုတာတစ်ခုရှိပါတယ် သယ်ရင်းတို့အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမတွေကိုလိုက်မယ် (အရှင်းဆုံးပြောရရင် လိုးရဖို့ကြိုးစားမယ်)ဆိုရင် ပထမဆုံးသူတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်အရင်လုပ်ကြပါနော် အပျိုတွေကိုလိုက်သလို Read more
” ငယ်ပါသေးတယ် ကလေးရယ် ” ( Sex အပြင်းစားဖြစ်ပါသဖြင့် ၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ) ပူပြင်းလှသော နွေနေ့လေးတစ်နေ့ ။ ဒီနေ့ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုအလည်သွားမိခဲ့တာက စရမှာပေါ့ ။ အိမ်ထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းပဲ ” ဟာ သားကြီးမင်းလာတာနဲ့အတော်ပဲ ငါဒီနေ့ဆော် နဲ့ချိန်းထားတာကွ အိမ်ကိုခဏစောင့်ပေးစမ်းပါ ငါ့အမေလဲ သူ့ ညီမငါ့အဒေါ်ခေါ်သွားလို့ လှည်းကူးဖက်ခဏသွားတယ် ညနေမှပြန်ရောက်မယ် ထင်တယ် ” သူငယ်ချင်းရဲ့ပြောစကားကြောင့် ” ဒါများကွာ အိမ်တံခါးပိတ်ပြီးသွားပေါ့ကွမင်းကလဲ ” ” အေး ငါ့ညီမဝမ်းကွဲလေးပါလာလို့ပေါ့ကွ ငါ့အဒေါ်က သူ့သမီးကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးသွားတာ Read more
မောင်မနိုးပါစေနဲ့ (18+) ……………………………… #မောင်မောင်ပြာ ဆောင်းဦးပေါက်ကာစ ညနေခင်းသည် သာယာ ညွတ်နူးဖွယ်ကောင်းလှသည်။ကောင်းကင်သည်တိမ်မျှင် တိမ်စတစ်ချို့ကလွဲပြီး လင်းရှင်းနေတော့သည်။ အမှောင်လည်းမဝင်ရောက်သေး။အလင်းရောင်လည်း မဆုတ်သာသေးပေ။နေဝန်းနီနီသည်လည်း ဟိုးးးမိုးကုတ်စက်ဝိုင်း အနောက်ဘက်ယွန်းယွန်းဆီမှာ နစ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသည်။ ဒီလို ဆောင်းဦးပေါက်စ ညနေခင်းတွေကို ဇင်မာ အလွန်သဘောကျသည်။ဒီလို ညနေခင်းရှုခင်းတွေကို ထိုင်ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲမှာပျော်သည်။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာလည်း ကြည်နူးစိတ်နဲ့ အကြည်ဓါတ်ကလေး တလှပ်လှပ်တိုးဝင်နေတော့သည်။ အိပ်တန်းပြန်ငှက်တို့သည် ဇင်မာ ခေါင်းပေါ်မှ တငြိမ့်ငြိမ့် နဲ့ပြန်သန်းနေကြသည်။ဆောင်းဦးပေါက် လတ်ဆတ်တဲ့ လေညှင်းကလေးတို့သည်လည်း ဇင်မာ တစ်ကိုယ်လုံးကို ရစ်သိုင်းကာ ကျီဆယ်ဆော့ကစားနေကြသည်။ ထို Read more
“အချစ်ဇာတ်လမ်းခပ်ကြမ်းကြမ်း”(စ/ဆုံး) သူက ကျွန်မကို အိပ်ယာပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်သည်။ ကျွန်မ ကိုယ်ပေါ်မှာ အနက်ရောင်အတွင်းခံ ဝမ်းဆက် လေးကလွဲ ပြီး ဘာမှမကျန်တော့ ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာလဲ အားကစားဘောင်းဘီတိုလေးတစ်ထည်တည်း ဝတ်ထားတော့သည်။ သူက ကျွန်မလည်တိုင်ကို ဖွဖွ နမ်းရင် bra ချိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်သည်။ ဖြူဖွေး ဝင်းမွတ်ပြီး ဆူဖြိုးလှတဲ့ကျွန်မရင်သားတွေက အကာအကွယ်မဲ့ ပေါ်လာသည်။ သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မနို့အုံကြီးတစ်ဖက်ကို ဆုပ်နယ်ရင်း နို့သီးခေါင်းချွန်ချွန်လေးကို ငုံစို့လိုက်သည်။ နောက်လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မ ဝမ်းဗိုက်ပေါ်ပွတ်သပ်ရင်း အောက်ကို ဆင်းသွားသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးနား ရောက်လာသည်။ ဘောင်းဘီအောက်ထဲ Read more
ကြုံရ ဆုံရ ပထမ
“” ကြုံရ ဆုံရ ပထမ “” ———– “ရှူး……..ဟား” လေယာဉ်ပေါ်က အဆင်းတွင် အေးမြပြီး လတ်ဆတ်သော ရန်ကုန်ဧ။် ဒီဇင်ဘာလေကို တဝ ရှူပြစ်လိုက်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးသော နိုင်ငံတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော လူငယ်သဘာဝ အတိုင်း အများနည်းတူ စွန့်စားကာ မြို့ပြလူနေမှု စနစ် ရှေ့ရောက်နေသော ဂျပန်တွင် ကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်လုပ်နေသည်မှာ ၃ နှစ်ကျော်လေပြီ။ အခုဆို နောင်ရဲ အသက် ၂၇ ပင် ပြည့်တော့မည်။ မိဘများ ဆုံးပါးပြီးနောက် တစ်ကောင်ကြွက် Read more
“” တဆုံးထိုး၍ လိုးလိုကျပါ “” ————— အိပ်ခန်းထဲမှာ မုန်တိုင်းကျနေသလိုထင်ရသည်။ ဝါဝါမွန်တစ်ယောက် ကိုတင်မောင်ကျောပြင်ကို တင်းတင်းကြီးဖက်တွယ်ပြီး တဏှာပြင်းပြင်းနှင့် သူမကို တအုန်းအုန်း တဒိုင်းဒိုင်း အသံထွက်အောင် လိုးဆောင့်ပေးနေသော ကိုတင်မောင်၏ဆောင့်ချက်များကို အောက်ကနေ သူမဖင်ကြီးကော့ကာတစ်မျိုး ပင့်ကာတစ်သွယ်ဖြင့် စည်းကိုက်ဝါးကိုက်ဖြစ်အောင် ပြန်လည်ညှောင့်လိုးရင်း ပါရမီဖြည့်ပေးနေပါသည်။ ကိုတင်မောင်ကား နေ့ခင်းကြောင်တောင် အချိန်ကြီးမှာပင် အလုပ်မှနေ၍ ထမင်းစားပြန်လာပြီး မယားချောလေးဖြစ်သူ ဝါဝါမွန်ကို တစ်ချီမရမက ဆွဲနေခြင်းပဲ ဖြစ်သည်။ ဆောင့်ချက်များက တဖြည်းဖြည်းကြမ်းလာသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အထူးပဲလှပ၍ ခါးသေးရင်ချီ ရင်ထွားထွား တင်ကားကားဖြစ်သော Read more
“” ခယ်မလန်းလန်း အလိုးကြမ်း “” ———————– နေမင်း တောင်ကြီးသို့ပြန်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေသည်။ချစ်ရတဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးကို ခွဲရပြန်ဦးမည်။သူတောင်ကြီးတွင် ခြောက်လကျော်လောက်ပြီတာဝန်ကျနေတာ။အစိုးရဌာနကြီးတစ်ခုတွင် အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတောင်ကြီးမြို့နားတွင် စီမံကိန်းတစ်ခု၌တာဝန်ခံအဖြစ်စေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမို့ ငြင်းဆိုခွင့်မရှိပဲ ကျရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ဇနီးနှင့်သမီးကို ထားခဲ့ရပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျသည့်အချိန်မှစပြီး သမီး သုံးနှစ်ကျော်လာသည်အထိ အကြာကြီးမခွဲဖူးသောကြောင့် ရောက်စရက်များတွင် သတိရလွမ်းမိသည်။သမီးကလဲ ခွဲစမရှိ ဇနီးကလဲ မခွဲဖူးသောကြောင့် ညတိုင်းဖုန်းပြောရင်း အလွမ်းပြေရသည်။ခြောက်လကျော်တော့ ရုံးချုပ်မှ အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုနှင့် သူ့ကိုခေါ်လို့ လာရင်းနဲ့ နှစ်ပတ်ကျော်ကြာအောင် နေလိုက်ရသည်။ ။ဒီတစ်ခါပြန်ရမည်မှာ သူတစ်ဦးတည်းမဟုတ်တော့။သူ့မိန်းမရဲ့ ညီမဝမ်းကွဲ သူ့ခယ်မပါ ပါသည်။ခယ်မက Read more
နှစ်ဖုတ် နဲ့ တစ်ယောက်
“” နှစ်ဖုတ် နဲ့ တစ်ယောက် “” ——————- အောင်ထွန်းတို့မိသားစု လေးယောက် အကိုဖြစ်သူကတာဝန်နှင့် တစ်နယ်တစ်ကျေးမှာ၊ အဖေကတော့ ကုန်တင်ကားမောင်း၊အမေကတော့ ကွယ်လွန်သည်မှာ ရက်ပိုင်းသာရှိသေးသည်။ အောင်ထွန်းပညာရေးမှာ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကာစသာ ရှိသေးသည်။ သင်းသင်းနွယ်မှာ အသက်က၂၇အိမ်ထောင်သည်၊အဖေဖြစ်သူက ဘုရားဂေါပက တစ်နေကုန်ဘုရားမှာ၊အမေကတော့ လေဖြတ်နေသည်။သင်းသင်းနွယ်မှာ ဝါသနာအရ ယောက်ျားဖြစ်သူ အလုပ်မှပန်းတိမ်ပစ္စည်းများကို အိမ်မှာပင် အမေဖြစ်သူကိုပြုစုရင်းလုပ်ကိုင်သည်။သားသမီးကတော့မထွန်းကားပေ။ ဝေဝေစိုးမှာ သင်းသင်းနွယ်နှင့် ရပ်ကွက်တစ်ခုတည်းနေသည်၊ဆယ်တန်းကတော့အောင်ပြီးသား။သင်းသင်းနွယ် ထူးခြားချက်မှာယောက်ျားလျာဖြစ်သည်။ သုံးဦးမှာဝမ်းကွဲမောင်နှမများဖြစ်ကြသည်။တော်စပ်ကြပုံမှာ သင်းသင်းနွယ်အဖေနှင့် အောင်ထွန်းအဖေမှာ ညီအကို၊သင်းသင်းနွယ်အမေနှင့် ဝေဝေစိုးအမေမှာညီအမများဖြစ်ကြသည်။သင်းသင်းနွယ်က ကြားခံမောင်နှမဖြစ်ရသည်။ အောင်ထွန်းအဖေမှာ အလုပ်ဝင်ချိန် သားဖြစ်သူကို Read more
ယောက်ျားချင်း အလဲအလှယ်လုပ်ပီး အလိုးခံခဲ့တုန်းက
ယောက်ျားချင်း အလဲအလှယ်လုပ်ပီး အလိုးခံခဲ့တုန်းက သျှင်သွေး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ထံ မှ ဖုန်း ဖြင့် ကူးယူ ထားသော အပြာကားများ ကို နားကျပ် တပ်ကာ ဆေးလိပ်ဖွာ ရင်း ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်ကာ အိမ် ခန်းဆီး ကို မှီပြီး ထိုင်လိုက်သည် ။ မိန်းမ ဖြစ်သူ အိတုံ က တော့ အခန်း ထဲ တွင် အိပ်မောကျ နေလေသည် ။ နွေ ရာသီ မို့ Read more
ကျတော်၁၆နစ်သားလောက်က ကျတော့အကို သူ့ရည်းစားနဲ့တွေ့တိုင်း လိုက်သွားရတယ်။သူုရည်းစားကလည်း သူ့အမကို အမြဲတမ်း ခေါ်လာတက်တယ်။ သူရည်စားကတော့ ကိုယ်လုးံကိုယ်ထည် တောင့်တောင့်တင်းတင်းနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရင်သားတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်တယ
. #ကျနော်_နဲ့_ညီမ_နှစ်ယောက် . ကျတော်၁၆နစ်သားလောက်က ကျတော့အကို သူ့ရည်းစားနဲ့တွေ့တိုင်း လိုက်သွားရတယ်။သူုရည်းစားကလည်း သူ့အမကို အမြဲတမ်း ခေါ်လာတက်တယ်။ သူရည်စားကတော့ ကိုယ်လုးံကိုယ်ထည် တောင့်တောင့်တင်းတင်းနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရင်သားတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်တယ.်။ ဖင်ကြီးတွေကလည်း တုံခါနေအောင်ကြီးတာ။ သူ့အမကျတော့ အရပ်ပုတယ်။ အသားကဖြူတယ် တင်ကတော့မကြီးမသေးပေါ့။အကိုက သူချစ်သူအမနဲ့ကျတော့ကို ထားခဲ့ပြီး ကိုင်းပင် အကြယ္ကို သွားကြတာပေါ့။ ကျတော့အကိုနာမည်က ကိုမျိုး၊ကျတော့နာမည့်ကမင်းမင်း၊အကို့ချစ်သူက မချို၊မချိုအမနာမည်က မသန့်သန့်တဲ့။ သူတို့လည်းသွားရော ကျတော်နဲ့မသန့်သန့်လည်းစကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သူ့မှာရည်းစားရှိတဲ့အကြောင်း၊သူဘဝအကြောင်းတွေစုံပလုံနေတာပဲ။ကျတော်နားထောင်နေရင်း ကိုမျိုးတို့ဘက်က အသံဘလံတွေကြားကြားနေရတယ်။တခါခါတခါ ရန်ဖြစ်နေသလားထင်ရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲ ..အကိုနော်..ဆိုပြီး အကျယ်ကြီး ကြားလိုက်တယ်။အဲဒါနဲ့မသန့်သန့်ကလည်း ရန်ဖြစ်နေသလား မသိဘူး Read more